Tuke Somalism, April 8, 2018
Gabar Jinni Been ah Isku Ridday – Gabadhihii aan xan dhageystay: sheeko yaab leh!
Cabdijabaar Sh. Axmed, June 24, 2016
Raxma Cali Yuusuf — April 12, 2018
Jabtadu waa cudur infekshan bakteeriya ay dhaliso. Bakteeriyada dhalisa cudurka Jabtada waxaa loo yaqaan “Neisseria gonorrhoea”.
Waa Maxay Calaamadaha Iyo Astaamaha Lagu Garto Cudurka Jabtada?
Astaamaha xanuunku waxay soo baxaan inta udhaxaysa 1 ilaa 14 cisho ragga iyo dumarku ma ahaa isku calaamado. Ragga ayeey inta badan ka muuqdaan calaamaduhu.
Calaamadaha lagu garto inay raggu qabaan cudurka Jabtada waxaa ka mid ah:
1. Dheecaan huruudi ama cadaan ah oo ragga ka yimaada.
2. Cuncun ama wax ka yimaada dabada.
3. Barar kudhaca mindhicirka iyo kaadi mareenka.
4. Kaadida oo badata.
Calaamadaha lagu garto dumarka qaba cudurka Jabtada waxaa ka mid ah:
1. Caadada dumarka iyo wixii la mida oo isbedela ayado ay soo racaan dheecaan leh midab huruudi ah.
2. Xanuun inay dareeman markay kaadshayan.
3. Cuncun ama wax kayimaada dabada.
Siddee Loo Kala Qaada Cudurka Jabtada?
1. Waxaa lagu kala qadaa galmada.
2. Ado taabta xubinta ama cawrada qofka qaba Jabtada.
Siddee Loo Daaweeya Cudurka Jabtada?
Inta badan dhakhaatiirtu waxay uqoraan bukaha cudurka Jabtada qaba daawooyin kuligood ah antibiyootik (antibiotics). Waxaa kamid ah daawooyinkaa:
Haddii uu bukaha cudurka qabaa uu yahay haweeney uur leh ama qof da’diisu ka yar tahay 18 sano looma ogola inuu isticmaalo dawooyinka khaasatan kuwa lagu magacaabo:
Talo iyo waano idinkaga timid walaal idin jecel:
Waxaa muhiim ah inaad joojisan galmada xaaraanta ah waayo waxay idinku sababaysaa xanuuno sidda cudurka Jabtada waxana inta kudheer Alle caradiisa oo kugu dhacaysa waa in aan iska illaalinaa galmada xaraanta ah san uhelno nolol kudheehan caafimaad iyo farxad.
Cudurka Aydhiska “AIDS” Iyo Sidda Loo Daaweeyo maqaal la xariira qoraalkaan.
Calaamadaha Uurka lagu Garto maqaal la xariira caafimaadka
Next post Soomaaliya Waa Meelaha Meherka ugu Qaalisan
Previous post Cudurka Aydhiska “AIDS” Iyo Sidda Loo Daaweeyo
About the Author Raxma Cali Yuusuf
Waa qoraa ka tirsan Tuke Somalism. Waxay wax ka qortaa arrimaha caafimaadka, cudurada guud, daaweynta, cudurada dilaagga ah, xikmadaha dhaqanka iyo guud ahaan horumarinta caafimaadka dadweynaha. Qoraagga ayaa ah shaqsi aqqoonta maadiga u leh caafimaadka, waliba heerka koowaad ee jaamacada. Siddoo kale waxay aad u jeceshahay inay bulshada usoo gudbiso waxyaabaha la xariira caafimaadka.
Ilhaan Ciise Maxamed, May 3, 2018